Wararka Maanta: Arbaco, Nov 18, 2020-Sarkaal katirsan maxkamada gobolka Sool oo lagu dilay magaalada Laascaanood
Masuulkaan ayaa la dilay xilli uu sii galayey hoygiisa. Lama garanayo sababta loo dilay iyo cidda ka dambeysa dilkiisa.
Horaantii sanadkaan, Laascaanood ayaa lagu dilay gudoomiyihii maxkamada gobolka Sool, kadib qarax loogu xiray gaarigiisa.
Ma jirto cid sheegatay dilkiisa weli.
Gobolka Sool oo hoos taga maamulka Somaliland, ayaa masuuliyiinta hay’adda garsoorka waxay ka yihiin dadka ugu badan ee la batilmaameesanayay 10 sano ee ugu dambeeyay.
Horey, waxaa magaalada loogu dilay guddoomiyayaal maxkamadeed, xeer ilaaliyalaal iyo saraakiil amni.